Anonymous December 24, 2010 at 8:31 PM
မေဓာဝီ December 24, 2010 at 8:32 PM
အဲလိုမျိုး ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်လေး အိမ်ပြန်ချင်လိုက်တာ ... ။
ဖြူ December 24, 2010 at 8:38 PM
ရေးထားတာ ပီပြင်လွန်းလို့ ဖတ်ပြီး ငိုင်သွားတယ်...
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 24, 2010 at 9:05 PM
အင်း.......ရုတ်တရက် အဲလိဲုပြန်တာ ငယ်ငယ်က ခနခန လုပ်တယ်... ခုတော့လဲ...အဖေတို့ အမေတို့ မရှိတော့လို့..... ပြန်တယ်ဆိုလဲ....တရက်ကုန်လို့ ၂ရက်မြောက်နေ့မှာ....သူစိမ်းတွေအလည်မှာလို ခံစားရတယ်...အင်းလေ....ကိုယ်လဲမကြာခင်...အဖေတို့အမေတို့နောက်လိုက်ရတော့မယ်...ထင်ပါရဲ့...
Anonymous December 24, 2010 at 9:10 PM
အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဟူး ဟူး ဟူးးးးးးးးးးးးးးး
တီသက် အိမ်ပြန်ချင်တယ် ၂၀၁၂ သင်္ကြန်မှာပြန်မယ်..ကမ္ဘာမပျက်ခင်လေးအိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ်
I cried after reading this post because I miss my parents so much. This is reallyagood post.
မောင်လေး December 24, 2010 at 9:33 PM
ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းမှ ပြန်နိုင်တော့မယ်...။
Soe Yu December 24, 2010 at 9:46 PM
ဖတ် ပြီး ငို ချင် သွား တယ် . တီတီ သက် ဝေ ရက် စက် တယ် :'( :'(
သက်ဝေ December 24, 2010 at 10:01 PM
အမှန်ဆို ဖေဖေနဲ့ မေမေ ပြန်သွားတာ နှစ်ပတ်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဒီရက်တွေမှာ အိမ်ပြန်ကြတဲ့သူတွေ၊ မကြာခင်မှာ အိမ်ပြန်ကြမယ့်သူတွေ ကိုယ့်အနားမှာ အများကြီးတွေ့နေရတော့ ကိုယ်လဲ အိမ်ကို သိပ်လွမ်းလာပါတယ်... အဲဒီစိတ်နဲ့ ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်...
ကိုယ်နဲ့ခံစားချက်ခြင်း တူတဲ့သူတွေကို တွေ့လို့ အားတက်မိပေမယ့် အိမ်လွမ်းနေတဲ့သူတွေကို ပိုပြီး စိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်လိုက်မိသလို ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး... ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီစာကြောင်းတွေကို မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ဝေဝါးနေတဲ့ကြားက ရေးဖြစ်ပါတယ်...
သူငယ်ချင်းတွေ၊ မောင်နှမတွေ အားလုံး ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ပြန်နိုင်ကြပါစေ....
PAUK December 24, 2010 at 10:35 PM
အိမ်ပြန်ရင် မသက်ဝေလိုပဲ အိမ်ထမင်း အိမ်ဟင်းတွေပဲ
စားချင်ပါတယ်။ ညဆိဲု ညဈေးတန်းလျှောက်ပြီး
rose December 24, 2010 at 11:22 PM
မမသက်ဝေ စိတ်ကူးထဲက အိမ်ပြန်တဲ့ အကြောင်းလေး လာဖတ်ပါတယ်။ ရို့စ်တောင် ရန်ကုန်ပြန်လည်ချင်စိတ် ဖြစ်သွားတယ်။ ရို့စ် ကံကောင်းတာက ကိုယ့်မှာ အဖေရော၊ ညီမလေးတွေရော ရေခဲနေတဲ့ ဒ်ီနိုင်ငံမှာ အတူ ရှိနေကြတာပါပဲ။ အိမ်ကို လွမ်းတဲ့သူတွေ အိမ်ပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
sosegado December 24, 2010 at 11:38 PM
လက်မှတ်အရင်လုပ်ထား၊ Sat/ Sunday ကုန်ပြီပြောတယ် unless ပိုပေးနိုင်မှ၊
ရတဲ့ကိုးရက်က ရှစ်ရက် ခုနှစ်ရက်ဖြစ်သွားဦးမယ်။
ဇွန်မိုးစက် December 25, 2010 at 12:53 AM
အမဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြန်ခွင့်ရပါစေ။
ညီမက ဧပြီ၊ မေ လောက်မှပဲ ပြန်ဖြစ်တော့မယ်။
baby taster December 25, 2010 at 1:30 AM
ဒီပို့စ်လေးက ကျမကို မျက်ရည်တောင်လည်စေပါတယ်
အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ကျမလို အိမ်ပြန်ချင်ရဲ့နဲ့ ပြန်ခွင့်
မရှိတဲ့ လူတယောက်အတွက်တော့ ရုတ်တရက်သာ ပြန်ခွင့်ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင် အပျော်လွန်ပြီး နှလုံးရပ်သွား မယ်ထင်တယ်။
Shinlay December 25, 2010 at 1:39 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 25, 2010 at 1:55 AM
အစ်မသက်ဝေရဲက အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေး ပြည့်စုံပါစေရှင်။။
nu-san December 25, 2010 at 3:53 AM
မမပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း စိတ်ကူးနဲ့ အိမ်ပြန်လိုက်ဦးမယ် မရယ်..သူများတွေ အိမ်ပြန်ကြရင် ကျနော်လည်း ပြန်ချင်တယ်.. အိမ်ကိုလည်း လွမ်းတယ်.. :((
Hmoo December 25, 2010 at 5:06 AM
I can feel very well ...Sweet
ငွေစန္ဒာ December 25, 2010 at 8:58 AM
ညီမလေး December 25, 2010 at 9:38 AM
အိမ်ကိုလွမ်းတယ် မမသက်ဝေရယ်....လွမ်းတယ် ။
" အလွမ်း ပြန်ချင်စိတ်ကြောင့်... အလွမ်း ပြန်ချင်ဇောကြောင့်...
နေ့ခင်း အိပ်မက်ထဲမှာ... အတွေး အိပ်မက်ထဲမှာ... အိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်... ... ..."
တကယ်ပါပဲ။ အိပ်မက်တွေကို ပြန်ရေတွက်ရင် အိမ်ပြန်ရက်တွေနဲ့ချည်း ပြည့်နှက်နေတယ် မမသက်ဝေ..
Everybody wants to go home.ME TOO:(( With tear n running nose.....Gyidaw
ZZZ December 25, 2010 at 10:50 AM
အိမ်ပြန်ချင်သော်လည်း ဒီနှစ်အဖို. ခွင့်က တစ်ရက်ခွဲ အနုတ်ပြနေလို. မပြန်နိုင်ပါ ၊
sonata-cantata December 25, 2010 at 10:50 AM
တို့များလည်း အဲ့လိုမျိုး ပြန်ချင်တယ်
ကြည်ဖြူပိုင် December 25, 2010 at 2:51 PM
ပုံရိပ် / Pon Yate December 26, 2010 at 3:41 AM
★Craton December 26, 2010 at 5:39 AM
ဖတ်ပြီး ပျော်ရမယ့်အစား ငိုချင်သွားတယ်။ :S
အမိမြေ အလွမ်းပြေ January 1, 2011 at 8:42 PM